Zhiyun ကထုတ်လုပ် ရောင်းချမယ့် Smooth4အကြောင်းကို သဘောကျလို့ ရေးတာပါ... ယခုအချိန်အထိတော့ pre-Order အဖြစ်ပဲမှာယူနိုင်ပါသေးတယ်... ဒီ Smooth4အကြောင်းကို user manual နဲ့ https://youtu.be/fchHnWTIONQ က review ကို ကြည့်ပြီး ရေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်...
Zhiyun ကုမ္ပဏီက Smooth4မထုတ်ခင် Smooth-C, Smooth 2, Smooth-Q, Smooth3တွေ ထုတ်ခဲ့ပြီး Smooth-Q ဟာ လူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်... သုံးရတာအဆင်ပြေတာရော၊ ဈေးနှုန်းသက်သာမှုကြောင့်ပါ Smooth-Q ဟာ လူသုံးများခဲ့ပါတယ်... အခုအချိန်မှာ Smooth-Q ရဲ့ဈေးက USD99.0 ပဲရှိပါတယ်...
Smooth-Q တို့ Smooth4တို့ဆိုတာ နာမည်ကြီး Dji ကုမ္ပဏီကထုတ်တဲ့ osmo mobile, osmo mobile2တို့လိုမျိုး mobile ဖုန်းနဲ့ video ရိုက်တဲ့အခါ တည်ငြိမ်အောင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့ Gimbal Stabilizer မျိုးပါ...
Osmo mobile စထွက်တုန်းက USD299.0 ရှိခဲ့ပြီး Smooth-Q ရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုကြောင့်ထင်ပါတယ်... Osmo Mobile2ထွက်လာတော့ USD129.0 ဈေးနဲ့ ရောင်းချခဲ့ပါတယ်...
Zhiyun က အခုထုတ်ရောင်းမယ့် Smooth4ကို USD139.0 နဲ့ ရောင်းချမှာ ဖြစ်ပါတယ်... Smooth4ဟာ နာမည်ကြီး Dji ထုတ် osmo mobile2ထက် USD10 ဈေးပိုများပေမယ့်လည်း သူ့မှာပါတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေက osmo mobile2ထက်ပိုများပါတယ်...
Smooth4မှာပါတဲ့ ကျတော်ကြိုက်တာလေးတွေကိုပဲ ရွေးပြီး ရေးပါ့မယ်... ￼
Smooth4မှာ ဖုန်းကိုတပ်ပြီး ဖုန်းနဲ့ Smooth4ချိတ်ဆက်ပြီးတာနဲ့ ဖုန်းကိုကိုင်စရာမလိုအောင် mode ပြောင်းတာ function ပြောင်းတာတွေကို Smooth4မှာပါတဲ့ ခလုတ်တွေကနေ တဆင့် လုပ်ဆောင်လို့ရပါတယ်... ဖုန်း screen သွားပြီး တို့ထိစရာ မလိုတော့ပါဘူး... S
mooth4ရဲ့ ဘယ်ဘက်ဘေးက Zoom/Focus handwheel လေးကို အသုံးပြုပြီးတော့ zoom in/out လုပ်တာ၊ လိုချင်တဲ့ object ကို focus ပြောင်းဖြတ်တာမျိုးကို အလွယ်တူ လုပ်နိုင်ပါတယ်... အဲဒီလို လုပ်နိုင်တာ အတော်ကို အဆင်ပြေပါတယ်...
Panorama mode ၂-မျိုးပါလာပါတယ်... 180° pano နဲ့ 3x3 pano mode ပါ...
Multi-Exposure mode နဲ့ Long Exposure mode တွေ လည်းပါပါတယ်...
Review video အရဆိုရင် သူ့မှာပါတဲ့ slow motion video ဟာ အတော်လေးကို ကောင်းမွန်တာ တွေ့ရပါတယ်...
Smooth4မှာ ကျတော်အကြိုက်ဆုံး function တစ်ခုကတော့ Vertigo Shot လေးပါ... ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာတွေ့ရတဲ့ ရိုက်ချက်ပါ... လူရဲ့ အရွယ်အစားက ဒီတိုင်းပဲရှိနေပြီး နောက်က ရှုခင်းတွေကို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ zoom out/in ဖြစ်သွားတဲ့ ရိုက်ချက်မျိုးပါ... ပုံမှန်လူတွေရိုက်ဖို့ဆိုရင် ဒီရိုက်ချက်က ရိုက်ရတာ ခက်ခဲပါတယ်...
အဆုံးထိဖတ်ပေးလို့ ကျေးဇူးအထူးပဲ တင်ရှိပါတယ်...